समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको विकास अनिवार्य
अन्तर्वाता | 116 Views | Published Date : 11th December 2017 |
ब्यबसायी निकुन्ज न्योपाने सँगको छोटो मिठो कुराकानी…
> तपाई कहिलेदेखि व्यापार व्यवसायमा लाग्नु भयो ?
= २०५८ सालदेखि व्यवसायमा हात हालेको हुँ ।
> २०५८ सालदेखी शुरुवात गरेको कम्प्यूटर व्यवसायको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दा कस्तो रह्यो ?
= यो यात्रा एकदमै फलदायी रह्यो । सूचना प्रविधिको व्यवसायसँग सम्बन्धित अनेकौ किसिमका अनुभवहरु बटुल्ने अवसर प्राप्त भयो । नयाँ नयाँ प्रविधिमा अपडेट हुने बानी बस्यो, कुनै पनि किसिमको उपकरणमा समस्या आयो भने समाधानका लागि कोशिस गर्ने बानी नै भइसक्यो । सूचना प्रविधिमा नयाँ नयाँ किसिमको व्यवसायको अवसर खोज्ने रुचीको विकास भयो ।
> आफ्नो व्यवसायबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
= म एकदमै सन्तुष्ट छु । म आज जति परिपक्व, आत्म विस्वस्त, धैर्यवान र श्रृजनशील छु यो सबै यसैको कारण हो । त्यसैले म आफ्नो व्यवसायलाई पनि आफूलाई जत्तिकै सम्मान गर्दछु ।
> कम्प्यूटर व्यबसायमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति के हो ?
= यो व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो कम्प्यूटरको हार्डवेयर वा सफ्टवेयर समस्याहरुसँग जुध्नु । दिनप्रतिदिन नयाँ नयाँ समस्याहरु देखापर्दछन् । जानकारसँग कहिलेकाहि सहयोग लिउँ, उनीहरुलाई पनि थाहा नहुनसक्छ । अब यस अवस्थामा समाधान जसरी पनि निकाल्नै पर्दछ । ग्राहकहरु हामीप्रति निर्भर हुन्छन । उनीहरुलाई जतिसक्यो छिटो सेवादिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जहाँ मर्मत सेवा र प्राविधिक परामर्श सेवा एकदमै प्रभावकारी हुन्छ, त्यहाँ व्यवसाय रहन्छ ।
> कम्प्यूटर व्यवसायमा हार्डवेर फेज आउट हुने क्रम के छ ?
= सूचना प्रविधिको विकास संगसंगै गा्रहकहरुको चेतनाको विकास पनि वढ्दो छ । हार्डवेयर फेजआउट हुनुमा पनि यो एउटा कारण हुनसक्छ । फ्लप्पी डिष्क फेजआउट भएर र पेन डाइवको प्रयोग भएजस्तै डेस्कटप कम्प्यूटर फेजआउट नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन किनकि ल्यापटप, स्मार्टफोन र ट्यावका कारण अहिलेको डेस्कटप कम्प्यूटरको बिक्रीमा एकदमै गिरावट छ । डेस्कटप कम्प्यूटरप्रति गा्रहकहरुको रुची एकदमै न्यून छ । त्यसैले मलाई लाग्दछ, डेस्कटप कम्प्यूटर फेजआउट हुने क्रम छ । यसलाई अलइनवनपि सीले बिस्थापित गर्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
> सूचना प्रविधिमा ग्राहकहरुको जागरुकता कस्तो पाउनु भएको छ ?
= पहिल भन्दा अहिले एकदमै धेरै । पहिला ग्राहहरुले कस्तो किसिमको कम्प्यूटर लिने भनेर सल्लाह लिइ किन्ने गर्द थिए भने अहिले उनीहरुले मागे बमोजिमको कम्प्यूटर दिनुपर्र्ने हुन्छ । पहिला ग्राहकहरुलाई कम्यूटरको ब्राण्डको बारेमा त्यति थाहा हुदैनथ्यो भने अहिले उनीहरु ब्राण्ड तुलना गरेर खरिद गर्दछन् । आफूलाई आवश्यक पर्ने प्रोग्रामहरुको बारेमा कुरा गर्दछन् । आफ्नो घर वा कार्यालयमा सि सि टी भीलगाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछन् । आफ्नो आवश्यकतालाई हेरेर इन्टरनेटको स्पिड आफै निर्धारण गर्दछन् । आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारीहरुको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको बारेमा जान्ने कोशिस गर्दछन् । सूचना प्रविधिमा विद्यार्थीहरुको लगाव कस्तो पाउनुभएको छ ?
= विशेष गरेर स्कूलका विद्यार्थीहरु एकदमै धेरै जागरुक भएको पाइयो । आफ्नो कम्प्यूटरको सफ्टवेरको समस्याहरु आफै समाधान गरेको पनि पाइयो । उनीहरु नयाँ नयाँ किसिमका प्रोग्रामहरुमा पनि फ्यामिलियर भएका पनि छन् । यूट्यूव र गुगलको सहायताले उनीहरुले आफूलाई धेरै परिपक्व बनाइसकेका छन् । त्यसैले अहिले कम्प्यूटर मर्मत सेवाको बजार पनि खुम्चिदै गएको छ । आफ्नो कम्प्यूटर आफै मर्मत गर्नु उनीहरुका लागि सामान्य भइसकेको छ । केही विद्यार्थीहरुले इन्टरनेटबाटै राम्रो कमाइ पनि गरिरहेका छन् । अहिलेको विद्यार्थीहरुको रुची देख्दा, उनीहरुमा यस्तै निरन्तरता रहेमा, देशले राम्रा राम्रा सूचना प्रविधिका विज्ञहरु पाउने छ भन्ने म आशावादी छु ।
> समग्रमा कम्प्यूटरको बजार कस्तो छ ?
= एकदमै राम्रो छ । कम्प्युटरको बजार ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्यूटरमै मात्र सीमित होइन । यसका सेगमेन्टहरु धेरै छन् । आज विश्व बजारमै यसकै वर्चस्व छ । मानिसहरुका लागि यो एउटा अभिन्न अंग भइसक्यो । प्रत्येकका हातमा मोवाइल छन् । इन्टरनेट सर्वसुलभ हुदै गइरहको छ । प्रिन्टरहरुमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधि आइसके । पुराना सामानहरुलाई हटाई नयाँ नयाँ प्रविधिका सामानहरु प्रयोग गर्ने बेला आइसक्यो । यसकारण ग्राहकहरुको माग दोहरिने तथा तेहरिने अवस्था आउने छ । कुन ठाउँमा ग्राहकहरुको आवश्यकता के छ भनेर पहिल्याउने र प्रडक्टस बजारमा बिस्तार गराउनेहरुका लागि कम्प्यूटरको बजार एकदमै राम्रो छ ।> तपाईहरुबाट सबैभन्दा वढि बिक्री हुने ल्यापटप तथा ब्राण्डेड डेस्कटप कम्प्यूटर कुन व्राण्डको हो ?
= सवै ब्राण्डका कम्प्यूटरहरु बिक्री भइरहेका छन् । तर, ग्राहकहरुको पहिलो रोजाई डेल नै हुन्छ । कम्प्युटर जुन व्राण्डको खरीद गरे पनि भित्र पार्टस्हरुको गुणस्तर, परफर्मेन्स प्रायः एउटै हो, वाहिरको डिजाईन मात्र फरक पर्दछ । कम्प्यूटर खरीदगर्दा कम्प्यूटरको स्पेसिफिकेसनलाई विशेष ध्यान दिइ बाँकी अरु कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
> सीसी क्यामेराको प्रयोग कत्तिको छ ?
= सी सी क्यामेराको प्रयोग बढ्दो छ । धनजनको क्षतिबाट बच्नका लागि साथै कार्य उप्पादकत्वका लागि सी सी क्यामेराको आवश्यकता छ भनि ग्राहकहरुलाई वुझाउनु पर्दछ । र, केही ग्राहकहरुबाट सीधै माग पनि आइरहको छ । अहिले केवल पसल तथा कार्यालयहरुमा मात्र सी सी क्यामेरा लगाउने गरिएको छ । फाट्टफुट्ट घरमा पनि सी सी क्यामेरा लगाउने कार्य भइरहको छ । केही समयपछि घरघरमा पनि सी सी क्यामेराहरु लाग्नेछन् भनी म विश्वस्त छु ।
> अन्तमा, कम्प्यूटर प्रयोगकर्ताहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ?
= आफ्नो आवश्यकतालाई ध्यानमा दिई स्तरीय कम्प्युटर प्रयोग गर्नुस् । भाइरस, पावर, दुरुपयोग, गुणस्तरहीन एक्स्सरीज आदिबाट आफनो कम्प्यूटरलाई सुरक्षित गर्नहोस । इन्टरनेटबाट प्रशस्त जाननकारी लिई आफूलाई सूचना प्रविधिमा पनि अपडेट हुनुहोस् । अन्तमा गणतन्त्र पत्रिका युनिटलाई धेरै धेरै धन्यबाद ।